पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएका बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहका विद्यार्थीको गोप्य भेला, के भयो निर्णय ? — Sanchar Kendra
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक विवाद चर्किदै गएका बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले काठमाडाैंमा एक गोप्य भेला गरेका छन् ।
नेकपामा दुई अध्यक्षबीच विवाद चर्किँदै गएका बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहका विद्याथीहरू भेला भएका हुन् । विद्यार्थीहरूको भेलालाई नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन् ।
सोहि क्रममा नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले शनिबार सचिवालय बैठक बस्नैपर्ने बताएकी छिन । थापाथलीकाे इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएको विद्यार्थीहरूकाे भेलालाई सम्बाेधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भाग लिन्नँ भन्न नपाउने उनले बताइन। बैठकमा भाग लिएर निकास दिनुपर्ने शाक्यले बताइन । उनले भनिन, ‘भोलिको सचिवालयको बैठक हुनै पर्छ । अस्ति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको बैठकमा म आउँदिन, म बस्दिनँ, म छलफलमा भाग लिन्नँ भनेर भन्नुभयो । प्रचण्डको प्रतिवेदन पनि म मान्दिनँ भन्नुभयो । यो भन्न उहाँले पाउनु हुन्न । त्यसैले निकास बैठकबाटै हुनुपर्छ ।’
दुई वटा प्रतिवेदन आउँदैमा पार्टी विग्रहमा गइ नसक्ने पनि नेत्री शाक्यले बताइन । शनिबारकाे सचिवालयमा बसेर संयमताका साथ बहस गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरिएको पनि शाक्यले बताइन । उनले भनिन, ‘दुई वटा प्रतिवेदन आयो भन्दैमा पार्टी विग्रहमा जान्छ भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन । त्यसैले पहिलो कुरा भोलि सचिवालयको बैठकमा बस्ने र उहाँले दुई वटै प्रतिवेदन अगाडि राखेर अत्यन्तै संयमतताका साथ, नैतिकताका साथ लागेका कुराहरू खुलस्त ढङ्गले एकअर्कामा आलोचना नै गरेर प्रस्तुत भएर छलफल गर्ने हो भने एक/दुई दिन जान्छ होला । त्यसपछि एउटा निष्कर्ष आउँछ । अब कसरी एक ढिक्का बनाएर पार्टीलाई लैजाने भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ । त्योभन्दा अरू विकल्प खोज्नुभयो भने नोक्सान हुन्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज मान्दिनँ भन्नुभएको हो भने अर्का अध्यक्ष ओलीले प्रतिउत्तर किन दिनुभयो ? भन्दै शाक्यले प्रश्न गरिन । लिखित प्रतिउत्तर दिने तर छलफलमा बस्दिनँ भन्न नमिल्ने शाक्यले बताइन । ‘दस्तावेज मान्दिनँ भनेर भनेको हो भने उहाँले प्रतिउत्तर किन दिनुपर्‍याे । प्रचण्डले पेस गरिसकेपछि जे–जे त्यहाँभित्र छ, त्यसको प्रतिउत्तर उहाँले दिइ सक्नुभयो । लिखित प्रतिउत्तर दिने अनि छलफलमा भाग नलिने भनेर भाग्न मिल्छ ? बैठक छोडेर जान मिल्छ ? उहाँले समस्याको समाधान कसरी दिन खोजिराख्नु भएको छ, कहाँ गएर खोजिराख्नु भएको छ र बाहिरबाट समस्याको समाधान हुँदैन ।’
अध्यक्ष ओलीले नै पहल गरेर एकता भएको पार्टी भित्र देखिएका समस्याको समाधान गर्दै सबैलाई एक बनाएर लैजाने दायित्व पनि उनले बताइन । बैठकबाट भाग्ने विषय लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको पनि शाक्यले बताए ।
भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेकी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले पनि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली उपस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरिन । समस्याको समाधान गर्न बैठकमा भाग नलिनेलाई नेतृत्व मान्न नसकिने भुसालले बताइन ।
उनले भनिन, ‘प्रधानमन्त्रीले अस्तिको बैठकमा आउन्नँ भन्नुभएको हो । भोलिको बैठकमा आउनु हुन्नँ भन्ने लाग्दैन । आफैले ३८ पेजको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ र उहाँसित सम्बन्धित भएर सचिवालयमा अरूले पनि प्रस्ताव राख्नुभएको छ । ती प्रस्तावहरूको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुन्न । उहाँ आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ र बसेर छलफल गरेर समस्याको सामना गर्नुपर्छ । समस्याको सामना नगर्ने नेतृत्व हुन सक्दैन ।’
उनले जसले समस्याको छलफल गर्न सक्छ वा अन्तर्विरोधको हल गर्न सक्छ, त्यो मात्रै सही नेतृत्व हुने बताइन । भेलालाई दाहाल–नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुसाल, केन्द्रीय सदस्यहरू रामकुमारी झाँक्री, लेखनाथ न्यौपाने, ठाकुर गैह्रे लगायतले सम्बोधन गर्नुभयो । भेलामा पत्रकारहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन ।